福岡市 | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » Fukuoka
Updated: 2016-07-05 16:34
အိချိရန်း လားမဲန်း ခေါက်ဆွဲဆိုင်
လူသိများကျော်ကြားသော ၀က်ရိုးစွပ်ပြုတ် လားမဲန်းခေါက်ဆွဲ ဆိုင် ။ အော် ဒါ မှာ နည်းး ကတော့ ၊ပထမ လက်မှတ် ကို ၀ယ် ၊ ကောင်တာမှာ ထိုင် ပြီး စားပွဲ မှာ တင် ထား တဲ့ အော်ဒါ စာရွက် မှာ ကိုယ့် စိတ် ကြိုက...
Updated: 2016-07-05 11:21
ဟာကတဂိအွန်း ရာမခစ ဟာက တကို ကိုယ်စား ပြု တဲ့ ပွဲ တော် ကြီး
ဟာကတ ဂိအွန်း ရာမခစ ဟာ နှစ် စဉ် ၇ လပိုင်း ၁ ရက် နေ့ က နေ ၁၅ ရက် နေ့ အထိ ကျင်း ပ ပြု လုပ် ပြီး ကျင်း ပ နေစဉ် မီတာ ၁၀ ကျော် တဲ့ ရာမခစ စကြီး တွေ ကို တန်း စီ ထား တာ မြင် ရမှာ ဖြစ် ပြီး တော့...
Updated: 2016-07-04 15:38
JRဟာကတ ဘူတာကြီး ဖုခုအိုက ဂျပန်
ကျူရှူး ပြည် နယ် ရဲ့ ၀င်ပေါက် လို့ ခေါ် ဆို တဲ့ ဟာကတ ဘူတာကြီး ။ ဒီ နေ ရာ ကို အဓိက ထား ပြီး ကျူရှူး ( ခရူးရှူး ) နယ် ၊ခရိုင် တို့ ကို ပြေး ဆွဲ နေတဲ့ ကျဉ်ဆန်ရထား ၊ အမြန် ရထား ၊ အထူး ရထား နဲ့ အခြား သော ရထ...
စက်ရုံ နှင့် အသုံးအဆောင်စက်ရုံများ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းမီးရထား
Updated: 2016-06-16 17:01
ခူးရူးမဲ လားမဲန်း ခေါက် ဆွဲ
စာရေးဆရာ ခါဇုအိုးဒန်း က ဂျပန် နိုင် ငံ မှာ အကောင်း ဆုံး ဆို ပြီး ချီးမွမ်း ခဲ့ တဲ့ ခူးရူး မဲ လားမဲန်ခေါက် ဆွဲ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အရည်ပြစ်ပြစ် နဲ့ ၀က် ရိုး စွပ် ပြုတ် အရ သာ နဲ့ အဖြူ ရောင်း သန်း တဲ့ ခေါက် ဆ...
Updated: 2016-06-16 15:33
ဟာကတ ကပ်ကြေး ( ၀ယ်ယူဖို့ အရမ်းကို ခက် ခဲ တဲ့ ထက် သျှတဲ့ ကပ်ကြေး )
ဟာကတ ကပ်ကြေး ဟာ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ ဓလေ့ ထုံး တမ်း နဲ့ ယခင် နည်း ပ ညာအလျောက် ပြုလုပ် ထား တာ ဖြစ် ပြီး အလွန် ပင် အသွား ထက် ပါတယ်။ ခါမာခးရာခောတ် မှာ တောင် ပိုင်း ပြည် နယ် က နေ ပြန် လာ တဲ့ ရှကိုးခုမဲ ကနေ...
Updated: 2016-06-09 10:38
မိုမိုချိ ပင် လယ် ကမ်း ခြေ
ဟကတ ဆိပ်ကမ်း နဲ့ ဆက် သွယ် နေ တဲ့ လူ လုပ် ဆိပ် ကမ်း ပန်း ခြံ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး အနီး မှာ ( ဖုခုအိုးကတာဝါ ) က တည် ရှိ ပြီး အဲ့ ဒီ ရဲ့ မြောက် ဖက် မှာ တော့ သာယာသော သံသောင်ယံ က ရှိ...
Updated: 2016-06-09 10:00
ချာချာ မြို့ တော် ကိုခူရာ ဈေးဝယ်စင်တာကြီး
ရုပ်ရှင် ရုံ ( ရှိနိကွန် ) ၊ မိုးထိမြင့် တဲ့ ရဟတ် ကြီး ၊ အထူးအရောင်း ဆိုင် တန်း ကြီး ၊ ဈေးဝယ်စင် တာ၊ ဂိမ်း စင်တာ အစရှိ သည်တို့ က တနေရာ တည်း မှာ ပေါင်း စု ထား တဲ့ ချာချာတောင်း ( chachatown)...
စက်ရုံ နှင့် အသုံးအဆောင်စက်ရုံများ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း
Updated: 2016-06-06 16:56
သွားလာရေး လွယ် ကူချောမွေ့ ပြီး ဟာကတရဲ့ မြို့ တဲန်းဂျင်းက နေ နီးတဲ့ နေရာ မှာ ရှိ တဲ့ ( ဇဥအို) . ဆိုင် တွင်း ကို ၀င် ပြီ ဆို တာ နဲ့ ငါး ကန် အကြီး ကြီး နဲ့ သင်္ဘောကြီး နှစ်စင်း ကို တွေ့ ရပါ မယ်။ အဲ့ ဒါကတေ...
Updated: 2016-06-06 16:30
ရှိခနော့ ရှိမ နာ မည် ကြီး ( ရွှေ တံဆိပ် ဟော့ဒေါ့ဂ်)
ဟော့ဒေါ့ဂ် အရောင်း ဆိုင် ( ရာစုရာဂိ မရု ) မှာ ရောင်း ချ နေ တဲ့ ရှိခနော့ ရှိမ နာ မည် ကြီး ( ရွှေ တံဆိပ် ဟော့ဒေါ့ဂ်) . ဥမိနော့နကမိချိ ကနေ ရှိခနော့ရှိမ ကို သွား တဲ့ လမ်း မှာ ရှိ ပါ တယ်။...
Updated: 2016-06-06 15:49
တဲရဒရ ( ကိုဒိုဘုခိအန်း တဲရဒရ )
ဒဇိုင်းဖု တဲန်းမဲန်း ဘုရားကျောင်း ရဲ့ လျောက် လမ်း လေး ကို တက် လိုက် ရင် ၊ ဘယ်ဘက် အပေါ် ရှိ တဲ့ ဆိုင် ကတော့ တဲရဒရ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ပူပူနွေးနွေး ဆန် မုန့် တို့ ကို ဆိုင် အတွင်း မှာ သုံး ဆောင် နိုင် ပါ တယ်။...